France debere Mauritius na ndepụta 'acha uhie uhie' ọhụrụ ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Mauritius » France debere Mauritius na ndepụta 'acha uhie uhie' ọhụrụ ya
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụlọ ọrụ na-eme njem nlegharị anya nke Mauritius kwetara na gọọmenti France mere itinye Mauritius na ndepụta “acha uhie uhie” ọhụrụ ha nwa oge, tinyere mba itoolu ndị ọzọ dị na Ndịda Africa.
Kọmitii ngalaba na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Mauritius wepụtara nkwupụta nkwonkwo ndị a taa:
Ụlọ ọrụ na-eme njem nlegharị anya nke Mauritius kwetara mkpebi gọọmentị France itinye Mauritius na ndepụta “acha uhie uhie” ọhụrụ ha na nwa oge, yana mba itoolu ndị ọzọ nọ na ya Southern Africa.
Mkpebi a na-abịa n'oge na-adịghị mma maka mpaghara njem nlegharị anya nke Mauritian, ọnwa abụọ ka emepechara ókèala anyị maka ndị ọbịa si mba ọzọ gbara ọgwụ mgbochi. France bụ otu n'ime ahịa anyị bụ isi, anyị na-atụ ugbu a mmetụta mkpebi a ga-enwe n'oge ntinye akwụkwọ maka njedebe nke afọ bụ ihe na-ekwe nkwa.
N'agbanyeghị ọkwa gọọmentị France, Mauritius na-anọgide na-emeghe ebe anyị ga-aga n'ihu na-anabata ndị ọbịa chọrọ ịchọpụta ma ọ bụ chọpụtaghachi àgwàetiti anyị, na-agbaso ụkpụrụ ahụike dị ugbu a. Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya ga-aga n'ihu na-eme mbọ niile iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ na ndị ọbịa ha.
Ndị ọchịchị obodo na-akpọtụrụ ndị ọchịchị France dị mkpa. Na mgbakwunye, ndị nnọchi anya kọmitii njem nlegharị anya ọha / nkeonwe arịọlarị nzukọ gọọmentị na onye nnọchi anya France, Her Excellency Florence Caussé-Tissier. Nzukọ ndị ọchịchị na ndị nnọchi anya diplomatic ndị ọzọ ga-esochi.
Dị ka ihe ncheta, mkpa nke Gọọmenti nke Mauritius adịla mgbe niile ichebe ahụike nke ndị Mauritian, ndị bi na ndị ọbịa n'agwaetiti ahụ. Na nzaghachi na nchọpụta nke Omicron variant Mauritius akwụsịla njikọ ikuku na ọtụtụ mba.
A na-echebe Mauritius nke ọma pụọ ​​na mbubata COVID-19. A na-ahụta ụkpụrụ ahụike ọha anyị ka ọ kacha mma, yana anyị nwere ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị oke elu, ebe ihe karịrị pasentị 89 nke ndị okenye agbaala ọgwụ mgbochi. Enyere ndị ọrụ njem nlegharị anya ụzọ maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nke pụtara na a na-anabata ndị ọbịa ma na-elekọta naanị ndị ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na-aga n'ihu na-akwado mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke mba, bụ nke agbagoro n'oge na-adịbeghị anya site na ntinye nke ndị na-eto eto na-erubeghị afọ 18, yana iwebata mmemme nkwalite dose nke atọ, bụ nke eritelarị uru karịa 100,000 Mauritian.
Ezinụlọ ndị njem na Mauritius ka dị n'otu n'agbanyeghị ihe ịma aka ọhụrụ a ihu. Anyị na-akpọku gọọmentị France ka ha nyochaa mkpebi a ozugbo enwere ike ibelata mmetụta na ụlọ ọrụ nke ihe karịrị mmadụ 150,000 na-adabere na ya, nke na-alaghachikwa naanị n'ụkwụ ya.